Kooxda Chelsea oo heshiis cusub oo waqti dheer ah ka saxiixatay mid ka mid ah da’yarteeda – Gool FM
(London) 15 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa heshiis cusub oo waqti dheer ah ka saxiixatay mid ka mid ah xiddigaheeda da’da yar.
Xiddiga xulka qaranka England ee ciyaartoyda da’doodu ka hooseyso 21-ka sano ee Mason Mount ayaa saxiixay heshiis shan sanadood ah oo uu kula sii joogayo kooxda Chelsea.
20-sano jirkaan khadka dhexe ayaa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ku qaatay ka hoos ciyaaridda macallinka cusub ee Blues, Frank Lampard intii uu amaahda ku joogay kooxda Derby.
Mount ayaan weli kulankiisii ugu horreeyey u safan kooxda koowaad ee Chelsea, inkastoo uu bandhig wacan ka sameeyey kooxda Derby intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, waxaana uu u dhaliyey 11 gool 44 kulan oo uu u saftay tartammada oo dhan.
Waxa uu ciyaaray kulan ay ka horjeedeen Blues oo ahaa Carabao Cup bishii October.
Frank Lampard ayaa aad u la dhacsan qaab ciyaareedka da’yarkan Mason Mount, waana tan keentay inuu haatan heshiis cusub ka saxiixdo maadaama ay wada yimaadeen oo ay dib ugu soo laabteen kooxda Chelsea.
Mount ayaa amaah ku soo qaatay kooxda Vitesse Arnhem xilli ciyaareedkii 2017-18, waxaana uu u dhaliyey sagaal gool 29 kulan oo uu ciyaaray horyaalka Eredivisie.
"Waan ku faraxsanahay inaan halkaan joogo" - Ramsey oo kasoo muuqday shirkiisii jaraa'id ugu horeeyay isagoo ah ciyaaryahan ka tirsan Juventus